Archive du 20200221
Paikady Enti-manandratra an'i Madagasikara Hanome 240 tapitrisa euros ny Frantsay
Nambaran’Atoa Jean-Yves Le Drian, minisitry ny raharaham-bahiny Frantsay omaly nanoloana ny mpanao gazety fa mitohy ny fifampidinihana ny amin’ny famerenana ny « Iles Eparses » ho an’ny Malagasy.
Fanendrena olona ambony Nisavoritaka indray ny fanjakana
Navoakan’ny fampahalalam-baovao iray omaly fa voatendry ho Sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny angovo sy akoran’afo Atoa Andriatongarivo Nasolo Tojonirina,
Imbiki Herilaza “Mivangongo loatra amin’ny fanjakana foibe ny fahefana”
Ny atao hoe fitsinjaram-pahefana mahefa dia fahefana ara-politika, ara-pitantanana ary ara-bola.
Antenimieram-pirenena Misy depiote manambaka ireo «Assistant parlementaire »
Misy andiana « Assistant parlementaire », mpiara-miasa akaiky amina solombavambahoaka, mitaraina fa 100 000 Ar no mba tambin-karama omen’ny depiote azy ireo, raha tokony 460 000 Ariary izany.
Antoko Otrikafo Miantso fitokonana manoloana ny ambasady frantsay
Mandalo eto Madagasikara ankehitriny ny minisitry ny raharaham-bahiny frantsay, Jean Yves Le Drian,
Fikitihana lalàmpanorenana Mila aroso ireo fanitsiana hatao
Folo taona izao no nampiasana ny lalàmpanorenana Repoblika fahefatra. Misy zavatra mila hatsaraina nandritra izay fotoana izay toy ny fifandraisana eo amin’ny samy andrimpanjakana.
Kirendrarendra foana ve ?
Sarotra ny zavatra iainan’ny firenena amin’izao fotoana izao. Sesilany hatrany ny olana, izay toa tsy ahitan’ny fitondram-panjakana vahaolana maharitra sy mateza.
Sehatra harena an-kibon’ny tany Miasa mafy hametraka ny mangarahara
Tsy mihemotra intsony fa miroso hatrany ny lalana mankany amin’ny fanavaozana ny lalàna mifehy ny harena an-kibon’ny tany.
Sehatra fizahantany Hitombo ny Indiana hitsidika an’i Madagasikara
Nanomboka ny 15 febroary lasa teo no efa teto Madagasikara ireo mpandraharaha Indiana misehatra amin’ny fizahantany.
Tontolon’ny fahasalamana Namoahana fitaovana mandrefy ny tahan’ny kolikoly
Nanamboatra fitaovana iray ahafahana mandrefy isan-taona ny fivoaran’ny kolikoly eo amin’ny sehatry ny fahasalamana eto
Sehatry ny asa Misongadina hatrany ireo mandalo fampiofanana
Tena ilaina ny fampiofanana amin’ny fidiran’ny tanora amin’ny sehatry ny asa.
Lehiben’ny faritra Boeny mpisolo toerana Hametraka ny faritra ho modely ara-toekarena
Hanao ny faritra Boeny ho fitaratra amin’ny ara-ekonomika ny lehiben’ny faritra Boeny mpisolo toerana, Atoa Bazezy Vanombe Clavelah Roslan, araka ny nambarany.
Ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo Hampiharina eto Antananarivo ny tetikasa SARU
Mandray ny tetikasa « SARU » na « Renforcement de la résilience climatique dans les Systèmes alimentaires en Régions Urbaines à Madagascar » ny kaominina Antananarivo.
Raharaha Tahisy Nidoboka eny Antanimora i Fanà
Taorian’ny fiakarana fampanoavana omaly, dia nalefa any am-ponja vonjimaika i Fanantenana na i Fana olon-tian’i Tahisy niaraka
Tranombokim-pirenena Vita ny fanisana sy ny fandraisana an-tsoratra ireo boky rehetra
Mitohy hatrany ny fanatsaran'ny minisiteran'ny serasera sy ny kolontsaina ny tranombokim-pirenena eto Madagasikara.
Tsenam-baro-panjakana Mitohy ny ezaka hampihenana ny kolikoly
Sambany no hisy eto amintsika ny oniversite manofana mpianatra ho matihanina amin’ny resaka Tsenam-baro-panjakana ( FACDEGMIA). Ao amin’ny oniversiten’i Toamasina
Hetsika FEPA andiany faha-12 Hasongadina ny tontolo ambanivohitra
Nampahafantarina omaly tetsy amin’ny foiben’ireo Malagasy matihanina amin’ny fambolena sy fiompiana etsy Nanisana na MPE omaly ny fanokafana indray ny hetsika foara FEPA
Mpiasan’ny PMU Nisy nantsoina indray ny sasany omaly
Anisan’ny vaovao nitana ny sain’ny maro hatramin’ny omaly ireo mpiasan’ny PMU Madagascar miisa 800 voatery naato tampoka
Maître Feno eny Itaosy «Mbola mitsabo sy mamaha olan’ny olona aho »
Niniana naely tany anaty tambajotran-tserasera rehetra tany ny vaovao tsy marim-pototra nilaza fa efa tsy eto Madagasikara intsony fa lasa nifindra fonenana any ivelany Randimbiarimanana Feno na i Maître Feno
Lalàna momba ny fanoherana Efa adino tanteraka
Fanamby napetraky ny filoha Rajoelina hatrany ny hoe “izay zavatra tsy vitan`ireo mpitondra nifanesy taorian`ny fahaleovantena dia hotanterahiko ao anatin`ny dimy taona”.